Dirree dhawaan Yeroo hunda du’aa fi darara simachaa jirti. Falli maali yaa Ummata Oromoo, Yaa Mootummaa Oromoo? – Kichuu
Magaala Dirre Dhawaa kessatti oromoon haala kanaan dhuma jirti
Shukrii Mohammed Umaraa
WE NEED FREEDOM FOR DIRRE DHAWAA
BILISUMMAA DIRREE DHAWAA FEENA
Tana duraas Gaafa Obboleeysa keenya Obsaa ajjeesan Milishaan Soomalee rabshaa kaasuudhaan deemanii raayyaa ittisa biyyaa yaammatanii Obsaa mataa kheeysa dhawanii ajjeesan.Nama heedduu miila dhawanii, ziyaadee ija beeysan. Gaafa Umarii fi Mucaa maqaa isaa fi eenyummaan isaa itti dhabame san kan ajjeesaniis jarumaa kanaa rabshaa khaasee khute ture.
Arraas isaanumaatu dhufee ganda weerare qeerroon Oromoo Dirree Dhawaa gocha kana firraa ittisuuf gadi bahe ajjefame.
Kan ajjeesaa jiruus mootummuma dirree dhawaati. Mootummaa fii Qaamota bulchinsa Dirree Dhawaatu Ammallee Ummata keenya galaafachaa jira. Yeroo Sabni biraa Jeequmsa Uumu Qawwee isaanii Samiirra dhawan. Yeroo Oromoon if baraaruuf dirmattu mataa kheeysa dhawan.
Mucaa bareedaa Sabboonaa sabaa kan duraaniis hidhanii hidhaa bahe kana ammaas kunoo badii takkaan malee bifa suukkanneessaa akkaaatiin Qaamni Mootummaa lubbuu isaa base. Yaa Saba koo mee hanga yoom akka Sareetti Duuna?
Sirna awwalcha Abdul kariim ahmad kan arra wareegame dirreedhawaa keessatti
Our children are still being gunned down! Dire Dhawa is bleeding
Black Day mucaa sabboonaa
Quuqama sabaa qabu kan amma dura sababa oromummaatiif waggaa lama mana hidhaa dirre dhawatti hidhamee ture arra harka diinaatin lubbuun isaa dabarte rabbiin lubbuutee jannataan si haa qananiisu yaa Abdukariimee kiyya jannata isaa siif haa khannu rabbiin
Farhan Abduselam Ahmed